Orodyahano soomaaliyeed oo ka qeyb ka qeyb qaatay ciyaaro ka dhacay Göteborg | Somaliska
Maxamed Cali oroyahanka reer Holland ee 5000 km. Foto: Ikraam
Suldaan Xasan orodyahan juunyeerka ee ku orda 5000 km. Foto:Ikraam
Inkastoo ciyaartii shalay aheyd mid caalami ah oo dalal badani ka soo qeyb galeen, ayey mar ay labadda orodyahan ay la hadleen shabakadda Somaliska.com waxaa ay sheegeen in kaalamiha ay kala galeen ee shanaad iyo afaraad aaneey ka hor is taageeyn ciyaaraha kale ee iyagana xilliyo dhaw la qabanayo. Suldaan Xasan oo ah orodyahan u ordayey gobolka Göteborg ayaa sheegay in bishan luulyo 22-keed uu ka qeyb qaadan doono ciyaaro kale oo halkaasi lugu qabanayo. Wuxuu tilmaamay in rajo ka qabo in halkaas guul kala soo hoydo. Suldaan waa orodyahan aad u dheereya intii ay socodtay ciyaartana aan marna dib u dhicin balse nasiibka ka hiiliyey. Suldaan ayaa ah ciyaaryahanka da’da ee juunyeerka ugu dheereeya xilligan dalkaan Iswiidhan sida uu sheegay tabarahiisa Kurt. Balse waxaan rajeeyneyna in fagaarayaasha caalamiga ka soo dhex muuqan doona isagoo gaaray hankiisii ahaa inuu la caan noqdo orodyahanadda caan baxay ee Maxamed Faarax (MO Farah) iyo Mustafa Maxamed oo labaduba u kala orda Ingiriiska iyo Iswiidhan .
Caasimadda labaad dheh saaxiib ee Göteburg